युगसम्बाद साप्ताहिक - नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा
Sunday, 04.05.2020, 11:10pm (GMT+5.5) Home Contact
नेताहरू सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन्म - हेश्वर शर्मा
Monday, 08.20.2012, 04:08pm (GMT+5.5)
केही वर्ष अघिको राजधानीको कुहेको गुँदपाक र नेपालको अहिलेको राजनीतिलाई जनताले ‘हात्ती र हात्तीछाप चप्पल उस्तै उस्तै हो नानू’ भन्न थालेका छन् । गुँदपाकका साहुजी त अरु त्यस्तै कुनै धन्दामा लागे होलान् नै, तर राजनीतिक साहुजीहरू चाहिं शिवजीले सतीको लाश बोकेर हिंडेजस्तो गरिरहेकै छन् । यहींनेर म शुक्राचार्यको कथन जोड्न चाहन्छु । उनी भन्छन्– “राजनीति गर्नेले जनताको आराधना गर्नुपर्छ, जनताका आशय बुझेर जे गर्दा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् त्यही गर्नुपर्छ” । उनको अर्को भनाइ छ– “जहाँ राज्य संचालनमा अविवेकी र स्वेच्छाचारी छन्, जहाँ सभासद पक्षपाती छन्, जहाँ विद्वान–बुद्धिजीवीहरू सन्मार्ग छोडेर विकेका छन्, जहाँ साक्षीहरू झूठो बोल्छन्, जहाँ दुरात्माहरूको प्राबल्य छ, त्यस्ता ठाउँमा धन–मान प्राप्त छ भने पनि एक दिन पनि नबस्नु ।” भनाइ राम्रो हो । ठाउँ हुनेहरू त दिल्ली, कलकत्ता, लखनउ, बनारस, पटना या दरभंगा जालान्, तर नेपालीलाई यहीं कुटीमाटी गरेर बाँच्नुछ, नबसेर कहाँ जानु ?
बस्न त जहाँ पनि सकिएला, तर मान्छे नै जहरिला भएका ठाउँमा बस्न र बाँच्न गाह्रो हुन्छ । राजनीतिमा जहर घोल्नेहरू नै यहाँ नेतृत्वमा हुनाले आजको राजनीति जनताका लागि जहर समान बनेको छ । यो जहर निकालेर राजनीतिलाई निर्विषीकरण गरेर जनमैत्री नबनाएसम्म यहाँ सुख शान्ति हुने कुनै लक्षण देखिंदैन । त्यसैले के गर्दा बस्न–खान हुन्छ, त्यसतर्फ नेताहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । तर नेताहरू नै किंकर्तव्यविमूढ छन्, पागलपन देखाउँदैछन्, जनतालाई समेत पागल बनाउन खोज्दैछन् । जति ठूला नेता उति नै ठूलो बेइमानी अर्थात् दर्जा अनुसारको बेइमानी यहाँ छ । कोलमा गोरु घुमेजस्तो नेताहरू सधैं सत्ता स्वार्थकै कोलमा घुमिरहेका छन् । हामी गलत बाटोमा छौं भन्ने जान्दाजान्दै पनि सुध्रने प्रयास नगर्नु विडम्बना नै भन्नुपर्छ ।
नेताहरूको सोचाई नै गलत भएपछि काम गराइ गलत हुनु स्वाभाविक हो । आफैंले पालन नगर्ने आचरणका आदेश–उपदेशबाट अनुशासन कायम हुन्छ, सुशासन चल्छ भन्नु नै गलत हो । नेता नै गलत भएपछि अरुले पनि त्यही बाटो समात्छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । नेताले मात्रै बेइमानी नगर्ने र जनतालाई सही बाटो देखाउने हो भने देश निर्माण गर्ने अपार शक्ति नेपालीका पाखुरामा छ । तर नेताहरूकै अज्ञान, अनाडीपन र भ्रष्ट मनोवृत्तिका कारण नेपालको युवाशक्ति एकातिर विदेशिएर अलपत्र हुन विवश छन् भने बाँकी पनि अनुकूल वातावरण र अवसर नपाएर कुण्ठित छन् । यो साह्रै बिझ्ने कुरा हो देशभक्तहरूका लागि ।
नेताहरू भाषण गरेर थाक्दैनन्, जनतालाई उपदेश मात्रै सुनाउँछन् तर आफैंले त्यो आचरण गर्दैनन् । प्रजातन्त्रका छ दशक बितिसके, स्थिति झन्झन् खराब हुँदैगएको छ । यसको कारण नेतृत्वकै कमजोरी हो भन्ने बुझेर पनि नेताहरूले त्यस कुराको उपेक्षा गरिरहेका छन् । आफूलाई जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरूलाई नै आफ्नो दायित्व बोध नभएपछि अव्यवस्था फैलिनु अनौठो होइन । आफ्नो ढंग नपुगेर अथवा बेइमानी र भ्रष्ट आचरणका कारण उत्पन्न समस्याका समाधान खोज्नु सट्टा अरुलाई नै दोष दिएर पन्छिन खोज्नु अर्को थप बेइमानी हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यहाँ कथित नेतृत्व मात्रै भयो, वास्तविक नेतृत्वको विकास नै हुन पाएन । जनताले विश्वसनीय नेतृत्व नै पाएनन्, चटके नेता मात्रै भए सडकछाप खालका । लोकतन्त्र र गणतन्त्र फलाक्दैमा हुने भए यहाँ प्रत्येक नेताले दिनको पचासपटक त्यस्ता शब्द दोहो¥याइरहेका छन् । खोइ त समाधान ? त्यसैले नेता र मन्त्री सर्वप्रथम आफ्नो पद मर्यादामा रहनुप¥यो । आफू निष्कलंक र निष्पक्ष भएको अनुभव जनतालाई गराउनुप¥यो । त्यो मुखले मात्रै होइन, कामै गरेर देशमा सरकार पनि छ, कानुन पनि छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन सक्नुप¥यो । खोइ, त्यसतर्फ कुनै काम भएको ? दोषी को हो ? हामी कता जाँदैछौं भनेर जनताले हेरिरहेका छन् । हामी के बोल्दैछौं र के गर्दैछौं भन्ने हेक्का पनि जनतालाई छ भन्ने नबिर्सौं ।
‘नेता’ भनेको के हो र नेता केका लागि ? यो नेता हुँ भन्नेले विचार गर्नुपर्ने गम्भीर प्रश्न हो । यदि देश र जनताका लागि हो भने तदनुकूल आचरण चाहियो, जनताका नाममा जनताकै शोषण गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति छोड्नुप¥यो । नेताका हरेक क्रियाकलाप जनताका पक्षमा हुनुपर्छन् । जनतालाई झुक्याउने काम असल नेताले गर्दैनन् । जनतालाई भ्रममा पार्न प्रजातन्त्रलाई नानाथरि तन्त्रका नाम भिराउँदैमा र राजमार्गलाई लोकमार्ग भन्दैमा यहाँ केही हुँदैन । केही हुन त आखिर कामै गर्नुपर्छ, थोत्रा गाला बजाएर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा अब त लाटाले पनि बुझिसकेका छन् ।
भनिन्छ– नेताका देखाउने र लुकाउने दुईथरि कुरा हुन्छन्, चवाउने र देखाउने दाँत भनेजस्तै । अध्यक्ष पुष्पकमलले हालै बनाएको गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नामका दुईटा दाँत देखाएका छन्, तर त्यसभित्र संघीयता, जात, धर्म, प्रदेश, सम्प्रदाय, जनतन्त्र आदि अनेकथरि दाँत लुकेका छन् भनेको सुनिन्छ । कांग्रेस–एमाले र वैद्यजीका फेरि केकस्ता र कतिथरि तन्त्र छन्, ती सबै बाहिर आउँदा नेपाल बहुतै धनी बहुतान्त्रिक मुलुक हुने भयो । यो गठबन्धनलाई प्रचण्डले ‘राजनीतिक स्वार्थमा मात्र आधारित नभएको’ (साउन ३२ का अखबार) भनेका र ‘राजनीतिक स्वार्थ मात्र’ भन्नाले त्यसभित्र त्यो स्वार्थ त छ नै यो गठबन्धन स्वच्छ मनसायबाट गरिएको हो भने यसको नाम गलत भयो । होइन र नाम सही ठानिएको छ भने यसभित्र षड्यन्त्र छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने ‘गठबन्धन’ भनेको साँठगाँठ हो कुनै स्वार्थ सिद्धिका लागि गरिने गुप्त षड्यन्त्र । यसको रहस्य परिणामबाट थाहा हुने नै छ ।
यतिखेर कामचलाउ सरकार र विपक्षीबीच दुश्मनी चर्केको छ । त्यो के का लागि भन्दा स्वार्थका लागि, कुर्सीका लागि । सरकार सबैलाई दबाएर–अँठ्याएर आफ्नो हुँदोमात्र गर्न खोजिरहेको छ भने विपक्षीले बन्द, हड्ताल, चक्काजाम आदिको सहारा लिंदैछन् । जताबाट पनि मर्का जनतालाई नै परेको छ । सरकार चाहिं विरोधको विरोध जनताले नै गरिदिएपछि ढुक्क छ । दायित्वबोध नभएको सरकार भएपछि यस्तै हुन्छ र जायज विरोध पनि सरकारले सुन्दैन । चक्काजामबाट आजित जनता विरोधमा उत्रिदिए हुन्थ्यो भनेर सरकार बसेको हुन्छ । ठूलै राष्ट्रिय र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना नभै सरकारका आँखा खुल्दैनन् । हिजो आज यस्तै स्थिति छ ।
चाहे प्रचण्डको लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक गठबन्धन होस् या बाबुरामको राजीनामा मागेर हड्ताल गर्नेहरूका कुरा, सहमतिका नारा फलाकेर बेइमानी गर्ने परम्परा नै यहाँ बसेको हुनाले स्थिति विग्रदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा षड्यन्त्र र दुराग्रहका नातामाना छोडेर पक्ष विपक्ष सबै समस्या समाधानको बाटोमा लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनचाहनालाई हृदयंगम गर्न सके राजनीतिले निकास पाउने थियो कि ?